Ithegi: ulawulo lweendaba kwimidiya | Martech Zone
Ithegi: ulawulo lweendaba zosasazo
NgoLwesithathu, Matshi 6, 2013 Douglas Karr
Imibutho yamashishini inemiceli mngeni emininzi efuna ukuba iimveliso zayo ziphuhliswe ngokwahlukileyo. Izicelo zamashishini zineendima eziphezulu, iimvume, ukunika ingxelo kunye nokuhamba komsebenzi, banokufuna iindlela zophicotho zeshishini lezempilo kunye nezemali, kwaye kufuneka balinganise ngokufanelekileyo. Ngaphakathi kwimidiya yoluntu, lo ngumceli mngeni ogqithileyo ngenxa yemiceli mngeni yedatha enkulu kunye namaqonga amaninzi afikelelekileyo. I-Altimeter ibeke i-Sprinklr njengeyona inakho ukuhlangabezana neemfuno zamashishini amakhulu. Uqoqosho lubekwe kwi-Sprinklr kwelona shishini liphezulu